AKHRISO:- Sooyaalka Iyo Taariikhda AUN Fanaannad Khadiijo Daleys – War La Helaa Talo La Helaa
AKHRISO:- Sooyaalka Iyo Taariikhda AUN Fanaannad Khadiijo Daleys
By Jiinoow	 On Jan 15, 2018
Magaceedu waa Khadiijo C/lahi Daleys, waxay ku dhalatay magaalada Baydhabo sanadkii 1934-kii ,waxayna kusoo barbaartay Isla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo ay ku sugnayd ilaa ay noqoto gabadh gashaanti guur gal ah.
Sido kale waxay waxbarashada hoose dhexe ku qaadatay isla gobolka Bay,waxaa laga sheegaa Dalays inay sameeyn jirtay heeso iyo ciyaaro marka la joogo xilliyada Fasaxa, islamarkaana waxay ahayd Inan Ilahay ku manaystay hibo iyo hal abuur aan horey loogu arag hablaha Aynigeeda ah.
Khadiijo ayaa ahayd howl kar hibo Ilahay ku hagoogay, taas oo ugu dambeyn keentay inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee inta masrax soo istaagto ku heesta Koonfurta Soomaliya, iyadoona sameeysay diiwaankaas 14-kii November sanadkii 1953-kii, balse waxaa ka caawiyay inay noqoto fanaanad caan ah gabadha caanka ah ee Xaliimo C/raxmaan oo iyana caan ku ahayd dhanka saarka.
Gaduudo Carawo iyo Daleys ayaa ah hooyoyinka fanka, waayo waxay ahayeen labadii gabadh ee ugu horeyay ee heesa gayiga soomaliya taariikhda, sidaa awadeed waxay mudan yihiin in si gooni ah loot ix galiyo.
Daleys ayaa ku luuqeeysay heeso badan oo iskugu jira wadani, Jecel iyo guubaabo, si lamid ah Khadiijo ayaa kasoo muuqatay riwaayado badan, kuwaas oo ay kala soo dhex muuqdeen fanaaniinta soomalifda kuwooda ugu waa wayn.
Khadiijo ayaa dagtay dalka Canada kadib markii uu dilaacay dur durki dagaalkii sokeeye 1991-kii, xilligaas oo ay dalka iskaga cararayeen hal doorada soomaliyeed iyago maciin biday wadamada dunida.
Dalays ayaa fanka ku guda jirtay in kabadan Lixdan Sano, walina ma cada inay soo gabagabaysay fanka iyo in kale, waxaase hubaal ah in aanay is badalin codkeeda, madaama Ilahay uu ku maneeystay cod halaasi ah kaas oo cid waliba ku riyooto.
Ina C/lahi hadda waxay qeyb ka ahayd Jaaliyada Soomalida Canada, xilli da’deeda ay 80 sano sii dhaaftay, balse lagama dareemeyn da’da oo waxa ay ahayd AUN joobanaato aan Jilib xanuun xitaa aan qabin, sidoo kale waxay kamid tahay dadka ugu saameeynta badan soomalida taariikhda, balse waxaa xusi doonta taariikhda.
15-ka January 2017-ka ayeey ku geeriyootay magaalada Toronto ee caasimadda dalka Canada, halkaas oo ay ku nooleyd 28-kii sano ee lasoo dhaafay.
DEG DEG:- Fanaannad Khadiijo Daleys Oo Canada Ku Geeriyootay
Duqa Muqdisho oo ka faalo qaaday cafimaadka gabar indhaha ka jiran oo dalka wax looga qaban waayay + Sawiro